2 Zvinhu Zvinhu Inishuwarenzi inoda kuziva Vasati Vazobhadhara Wiricheya Yako
Kutenga a wiricheya hazvisi nyore sezvaungafunge, kunyanya kana iwe uchida imwe inoenderana neyako maitiro uye zvaunofarira. Kana iwe uri kuvimba neinishuwarenzi yemari, kukodzera iyo a wiricheya iyo inosangana nezvinodiwa neinishuwarenzi zvakakosha.
Kuti zvikwanisire a wiricheya, iwe unofanirwa kuve mumiriri akakodzera uye uwane imwe yakakunakira iwe. Izvi zvakanyanya kuitira tsika rehab michina senge simba kubatsira, izvo zvinoda mari kupfuura zvakajairwa transport chair.
Simba rinobatsira zvigaro zadza iyo nzvimbo pakati pesimba mavhiripu uye manyore mavhiripu. Sezvo chiri chinhu chinodhura chakasarudzika, vanopa inishuwarenzi vanofanirwa kugutsikana kuti iyi ndiyo sarudzo yakanakira iwe.
Iyi inotevera miviri yakakosha mibvunzo inoda kupindurwa pamberi pekambani yeinishuwarenzi ichabhadhara simba rako kubatsira wiricheya.
1. Is Simba Rinobatsira wiricheya Yakanakira iwe?
Iwe unofanirwa kuona zvechokwadi kana simba richibatsira wiricheya zvakakunakira iwe.
Kana iwe usingakwanise kushandisa zvizere nzvimbo dzako dzepamusoro uye chigaro chakazara chemagetsi ndiyo yega sarudzo yako kufamba, simba rekubatsira wiricheya inogona kutongwa kunze mune ino mamiriro. Kune rimwe divi, kana iwe uri amburera uye uchigona kushandisa Walker nokuti kufamba, mumwe wiricheya yemhando ipi neipi inogona kunge isingadiwe.
Nekudaro, chigaro chesimba rekubatsira chinoshanda kune avo vanowira pakati peaya maviri akanyanyisa sevazhinji vashandisi ve sclerosis, vana vevana, uye quadriplegics. Iyo zvakare inofanirwa kushandira yako mamiriro epamba.
2. Is Simba Rinobatsira wiricheya Kukosha Kwezvokurapa Here?
Kwete izvo kare kare sarudzo chete wiricheya vashandisi vaive nechigaro chemanyorerwo. Nekuda kweizvozvo, zvigaro izvi zvaida huwandu hwesimba hwemuviri hwepamusoro uye kudzikisira vashandisi kuzvimirira. Vaifanira kusarudza kuwedzera muviri kana kurasikirwa nehupenyu hwavo hwekushandira zvachose.
Paive nevashandisi vaida kuramba vachishanda vasina uchiona kurwadziwa kana kuneta. Zvino, chigaro chesimba rekubatsira chave mhinduro kwayo. Inozadzikisa chinodikanwa chekurapa chemuviri wakarovedzwa - izvo zvinogona kubatsira mukudzivirira kusagadzikana kwakadai sehypertension, sitiroko, chirwere cheshuga, uye kurwadziwa pamwe. Panguva imwe chete, izvi zvinoderedza mukana wekudzokorora kushushikana matambudziko anogona kukanganisa zvachose kufamba.
Kuwana Inishuwarenzi Kubvumidzwa
Kana iwe uchinyatsotenda kuti simba rinobatsira wiricheya zvakakunakira uye chinodikanwa chekurapa, zvichave nyore kuratidza kukambani yeinishuwarenzi uye kuwana mari yaunoda.
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Unogona kutipa runhare ku 1-626-581-2235, kana ndapota takura nesu patinopindura kubvunza kwako.